Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. एएफसी यू–१९ च्यापिम्पयनसिप छनोट : आज नेपालले इरानको सामना गर्दै – Emountain TV
एएफसी यू–१९ च्यापिम्पयनसिप छनोट : आज नेपालले इरानको सामना गर्दै
काठमाडौं, २२ कात्तिक । एसियाली फुटबल परिषद् एएफसी यू–१९ च्यापिम्पयनसिप छनोट अन्तर्गत शुक्रबार नेपालले घरेलु टोली इरानको सामना गर्दैछ । छनोट पहिलो खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइसंग हार व्यहोरेको नेपालले दोस्रो खेलमा बलियो टिम इरानको सामना गर्न लागेको हो ।
नेपाल र इरानबीचको खेल इरानको पीएएस रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति ८ बजे सुरु हुनेछ । रेजिन सुब्बाको कप्तानीमो नेपाल यस अघि युनाईटेड अरब ईमिरेटसँग ४–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो । इरानले आफ्नो पहिलो खेलमा किर्गीस्तानलाई ३ – ० गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । शुक्रबार नै हुने पहिलो खेलमा युएई र किर्गीस्तान बीच खेल हुँदैछ ।
समूह डी मा इरान र युएईको समान ३ अंक रहेको छ । गोल अन्तरका आधारमा युएई पहिलो स्थानमा छ भने इरान दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल र किर्गीस्तान भने अंक विहीन रहँदै तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् । छनोट चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आगामी आईतबार किर्गीस्तानको सामना गर्नेछ ।